Hoggaanka cusub Ee Puntland iyo saamaynta Askartii Ururkii AI-Itixaad – Idil News
Hoggaanka cusub Ee Puntland iyo saamaynta Askartii Ururkii AI-Itixaad
Waxay ahayd 19kii Juun 1992, waa Garoowe, xilligaas waxay ahayd xarunta gobolka Nugaal, ma ahayn magaalo dhismo badan leh, waxaa camiray kumanaan qoys oo ka soo barakacay collaaddii qabiil ee ka taagnayd gobollada koonfureed iyo Waqooyi ee wadanka, waxaase markaas xarumo ku lahaa ururkii Al-itixaad oo ahaa ururkii Islaami ah ee ugu horeeyey xarumo askareed ku yeesha gudaha Soomaaliya.
Ururkaasi wuxuu fadhiisin ku lahaa xeradii ciidamada ee 54aad ee duleedka toga Garoowe, shir madaxdii ururkii SSDF uga socday xarunta gobolka ayaa ay weerar ku soo qaadeen, iyagoo gacanta ku dhiggay 28 xubnood oo ka mid ahaa madaxdii ururkaas. Waxaase halkaas ka bilowday dagaal dhiig badani ku daatay oo socday muddo ku dhow sanad.
Akhriste waxaan taariikhdaan kooban u soo qaatay talaabo geesinimo lahayd oo dagaalkaas lagu soo afjaray, qayb muhiim ahna ay ka qaateen culimada kala ahayd AHU Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax, Sheekh Sheekh Cali Warsame, Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed iyo Sheekh Xasan Daahir Aways, goo’aankii ay ururkaas hubaysnaa ee Bari iyo Sanaag ka dagalamayey ay ku kala direen ciidankoodii wuxuu ahaa.
“Dadkii ayaa laga dhex baxay, fadlan dadka dib ha loogu noqdo, waxna ha la baro, sidaas ayaan ku yeelan doonaa macne.”
27 Sano kabacdi dagaalkii Itixaadka
Hadda waxaa laga joogaa dagaalkaas 27 sano, goobtu waa Garoowe, waa caasimadda dawlad goboleedka Puntland, 21 sano ayuu maamulkaasi jiraa, waxaa dhidibada u taagay hogaamiyihii ururka Al-itixaad la diriray. Talada maamulka maanta hayaa, markaan xuuraamay xubnaha baarlamaanka 42 ka mid ahi waa askartii ururkaas Al-itixaad, gollaha wasiirada marka laga reebo ragga odayaasha ah waa ururkii Al-itixaad askartiisii, ku dar madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada kuwooda ugu muhiimsan, akhristow muhiim ma ahan inaan kuu wada magacaabo laakiin dadka maanta hogaanka u haya maamulka Puntland waa askartii ururkii Al-itixaad ee waagaas dagaalka ku jiray, weliba ma ahayn kuligood hogaanka ururkaas ee askartii dagalamaysay oo qaarkood ku dhaawacmeen weeye, xubin kastana adigu dib raac taariikhdiisii.
Waa taariikh muhiim ah oo u baahan in wax laga barto, waxaa shaqaysay taladii culimadu maalinkas gaareen ee ahayd dadka ha lagu dhex noqdo, waana talo weli u furan ururada diinta sheega inay u dagalamaan ee weli dhiigga daadinaya, askartii ururkii Itixaad ee maalinkaas la kala diray, faa’iidada ugu badan ee ay heleen waa inay hadda maamulka dawli ee ugu badan ay ku jiraan, waxayse ku soo galaan hab qabiil, kumay soo bixin afkaarta ururkaas burburay lahaa.
Isbedelka kale ee ku dhacay xubnihii ururkaas markay ku milmeen bulshada waxaa ugu weyn aasaaskii ururku lahaa oo ka tirtirmay, taasoo keentay in ururo kale qaybo ku biiraan, kuwo badani qurbaha aadan, halka in badan oo kalena ay arrimaha bulshada sida waxbarashada, ganacsiga, caafimaadka iyo hogaanka dhaqanka u bayreen.
Waxaase jira xan aad u culus oo bulshada Soomaaliyeed haraadigii Itixaadka ku eedeeyaan, waana inay yihiin kuwa ugu musuqa badan markay timaaddo qabashada xil maamul, sidoo kale waxaa lagu xantaa gacan adayg oo waxa soo gala waxba kama bixiyaan, waxaana baxday hal hays caan ah oo leh “Markaad xoolo hesho Itixaad noqo si xoolahaaga aadan wax uga bixin” anniga waxaan ka hadlayaa waa waxa bulshada dhex yaal.
Askartii Itixaad keliya kuma jiraan Puntland ee waxay ku jiraan dhamaan maamulada kale, Somaliland, Galmudug, Jubba land iyo Federaalka, waana lagu wada xantaa musuqa.
Ururka Itixaad waagaas wuxuu ahaa kan dadku ugu kalsooni badan yihiin markay timaado aamanada, waxay maamulayeen dekedda iyo isbitaalka Boosaaso, waana mahadiyeen dadkii, waayo waxay ka ilaaliyeen eex, laaluush, xatooyo iyo wax is daba marin. Haddaba maxay ku dhacday astaantii wanaagsanayd ee ururkaasi lahaa in askartii ururku markay hogaamiyayaal wada noqdeen inay noqdaan kuwa ugu musuqa badan dadka. Waxaa jirta xigmad tiraahda caleenta geedka siday u cagaaran tahay ayaad aragtaa iyadoo cadaatay, goor ay cadaatayna ma garan kartid, waana sida dadku ula yaaban yihiin sida dadkii dhaqanka Islaamka iyo mabaadiida diinta lagu tuhmayey in lagu tilmaamo dadka ugu musuqa badan!
Hoggaanka cusub iyo golaha wasiirada ee Puntland waxa laga dhowrayaa waa siday wax uga qabtaan musuqmaasuqa ragaadiyey Puntland, hadda oo askartii Itixaadkii burburay hoggaankii noqdeenna waxaa lagu sii eegayaa il gaar ah, ma wanaajin karaan muuqaalka laga haysto oo ah inay musuq iyo wadaniyad xumo ku caanbaxeen, oo ma soo celin doonaan aaminkii ay sameeyeen waagay bilowga ahaayeen?